बूढीगण्डकी आयोजना : कहिले तोकिएला आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा ? « Naya Page
बूढीगण्डकी आयोजना : कहिले तोकिएला आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा ?
मोटामोटी तयार छ मुआब्जा : मन्त्री पुन
प्रकाशित मिति :5June, 2019 11:39 am
काठमाडौं, जेठ २२ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका रूपमा रहेको धादिङ र गोरखाको दुई हजार ४ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगरिएकामा स्थानीयवासीले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्न थालेको चार वर्ष हुन लाग्दा समेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभएकामा आपत्ति जनाउँदै तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् । नियमानुसार मुआब्जा निर्धारणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्छ । निर्धारण भएका क्षेत्रका स्थानीयबासीले मुआब्जा लिई आफ्नो व्यवस्था गरे पनि केही स्थानमा मुआब्जा नै निर्धारण नहुँदा समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ ।
धादिङ र गोरखाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित एक टोलीले एकसरो प्रभावित क्षेत्र अवलोकन गरिसकेको छ । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजारको मुआब्जा तय भए पनि सरकारी दर र स्थानीयवासीको मागमा तालमेल मिल्न नसक्दा मुआब्जाको विषयमा अन्तिम निर्णय हुनसकेको थिएन ।
स्थानीयवासीले प्रतिआना २५ लाखका दरले मुआब्जा मागे पनि सरकारले के कति मात्रामा वितरण गर्न सक्छ भनेर कुनै सीमा निर्धारण गरेको छैन । बजार क्षेत्र भएकाले मुआब्जा अन्यत्र भन्दा बढी पर्ने स्थानीयवासीको जिकिर छ ।
स्थानीयमध्येका अगुवा दिनेशकुमार ढकाल भन्छन्, ‘घरमा खसी पालिएको छ, खसीको मूल्य यति हुन्छ भनेर हामीले माग गर्‍यौँ, लिन चाहनेले कति दिन्छ भन्ने त कमसेकम सार्वजनिक त हुनुपर्‍यो नि ?’ उनका अनुसार बजार क्षेत्रको करीब १५० रोपनी जग्गाको मुआब्जा बढी पर्न सक्छ, अन्यत्रको भने सहमतिमा मिलाउन सकिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण शुरु भएको थियो । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका कूल ५८ हजार १५२ रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाका अनुसार ५५ हजार ७५२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण कार्य जारी छ ।
गएको वैशाख मसान्तसम्म ४१ हजार ९३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी जग्गा भने दुई हजार ४ सय रोपनी मात्रै छ । मुआब्जा निर्धारण भएका क्षेत्रका नागरिकले धमाधम मुआब्जा लिइरहेका छन् । उनीहरूको सदीक्षा छ, आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा जाओस् र आफ्नो थातथलो डुबे पनि काम राम्रो होओस् ।
स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्न पुनस्र्थापना र पुनर्बासको योजना पनि सँगसँगै अगाडि बढाए मुआब्जाको विषयमा पनि सहमति हुनसक्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार मुआब्जा मोटामोटी तयार भएको र केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी रहेको छ । दिने र लिनेका बीचमा सामान्य समझदारी बनाउने प्रयास जारी रहेका कारण बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावल सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर नै निर्णयकर्ता र सरोकार भएका पक्षबीच छलफल गराइएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सहजरूपमा काम अगाडि बढोस् भन्ने लक्ष्यका साथ छलफल गराइएको र एक अर्काको चासो सम्बोधन गर्न प्रयत्न गरिएको हो’, सभापति रावलको भनाइ छ ।
गोरखाका स्थानीयवासी समेत रहनुभएका राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार आयोजनाको विषयमा आउने परस्परविरोधी हल्लाले प्रभावितलाई सबैभन्दा ठूलो पीडा दिन्छ । आरुघाट बजारबाट छ किलोमिटर माथिसम्मको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।
पछिल्लो पटक एक हजार २०० मेगावाटबाट क्षमता घटाएर ८०० सम्म बनाउन सकिने भन्दै चर्चा गरिएको थियो । ‘क्षमता घटाउन स्थानीयवासी तयार छैनन्, शुरुमा जति भनिएको हो, सोहीअनुसार नै निर्माण शुरु होओस्’, संविधानसभा सदस्य गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले भन्छन्, ‘सरकारले दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न, शीघ्र कार्यान्वयमा लैजानुपर्छ ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्मा क्षमता घटाउने विषयमा सरकारले कुनै चर्चा समेत नगरेकामा आएका अनावश्यक हल्लाको पछाडि लाग्नुको अर्थ नभएको बताउँछन् । त्यसो छ मन्त्री पुनले क्षमता घटाउने विषयमा सोच्न पनि नसकिने टिप्पणी गरिसकेका छन् ।